Mogadishu Journal » War deg deg ah : Qaraxyo ismiidaamin ah oo goor dhaw lagu weeraray maqaayada The Village ee magaalada Muqdisho
Mjournal : — War hadda naga soo gaaray agagaarka guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya ayaa sheegaya in labo qarax oo aad u waaweyn laga maqlay meel aan ka fogeyn maqaayada The Village, inkastoo wararka qaar sheegayaan in qaraxyadu ahaayeen weeraro ismiidaamin ah oo lala eegtay maqaayada.
Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qaraxyada dhacay qadar 10-daqiiqo ka hor, kaasoo xoogooda laga maqlayay qeybo badan oo magaalada ka mid ah, waxaana la sheegay in in ahaayeen labo qarax oo siweyn isugu dhawaan marka laga eego dhinaca waqtiga ay dhaceen.
Dad goob joogayaal ah ayaa si hor dhac ah noogu sheegay in qaraxyada ay ka dhaceen meel gadiidka la dhigto oo ah marxad ka danbeysa maqaayada The Village, lamana oga ilaa iyo hadda khasaaraha rasmiga ah oo ay geysteen.
Wararku waxaa ay intaa ku darrayaan halka gadiidkii yaalay ay bur bureen, waxaana goobta barxada aheyd meel aad ugu dhow Maqaaxida The Village ee Guriga Hooyooyinka, halkaasoo bishii September sanadkii 2012 lagu qaaday weeraro ismidaamin ah.
Warar ayaa iyaguna sheegaya in tiro meydad ah lagu arkayo goobta uu qarax ka dhacay, kuwaa daadsan ayaa la leeyahay meel Baakin ah oo gadiid la dhigto, lamana garanayo in weerar Ismiidamin ah lagu fuliyay gadiid ama ay isku qarxiyeen goobta dad waxlaha qarxa soo xirtay.
Wixii warar ee ku soo kordha kala soco wararkeena dambe…..
Aqriso war-murtiyeedkii ka soo baxay shirweynihii geedii socodka siyaasada ee lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho